Shiinaha maaskaro wajiga KS-9005 warshad iyo soosaarayaasha | Gubang
Walxaha sida kuwa ka shiidaya, xoqidda, xaaqida, miinshaarista, bacda, ama soosaarida macdanta, dhuxusha, birta, bur, bir, alwaax, manka, iyo walxo kale oo gaar ah. aerosolka saliida ama uumiga.
Maaskarada 'N95' waa mid ka mid ah sagaal waji-waji oo ilaaliya qayb ka mid ah oo ay caddeysay NIOSH. "N" macnaheedu waa adkaysi la'aan saliida. “95 ″ waxaa loola jeedaa markii loo bandhigo tiro cayiman oo ah qayb ka mid ah tijaabooyinka gaarka ah, isku-soo-ururinta walxaha ku dhex jira maaskarada ayaa in ka badan 95% ka hooseysa isku-uruurinta walxaha ka baxsan maaskaro. Qiimaha 95% ma ahan celcelis ahaan, laakiin waa midka ugu yar. N95 ma aha magac badeecad gaar ah. Ilaa iyo inta ay ka soo baxeyso heerka N95 oo ay ka gudubto dib u eegista NIOSH, waxaa lagu magacaabi karaa "N95 mask". Heerka ilaalinta ee N95 waxaa loola jeedaa iyadoo lagu jiro xaaladaha tijaabada ee lagu qeexay heerka NIOSH, waxtarka shaandhaynta maaddada maaskarada ee walxaha aan saliida lahayn (sida boodhka, ceeryaanta aashitada, ceeryaanta rinjiga, noolaha, iwm) wuxuu gaarayaa 95%.
Cabbirka: cabbirka buuxa
Wax ceyriin: oksaydh madow
Dhumucdiisuna: 0.1 inji
Dhar aan tolmo lahayn, cudbi hawo kulul, dhar dhalaalaya
Dabaqa 4-aad wuxuu ka caawiyaa iska caabinta raaxada buulka ee SMOG, siigada iyo SPIT.
Ka samaysan waxyaabo bey'adda u fiican, qoyaan-caddeyn, aan sun lahayn, aan xanaaq lahayn, jilicsan oo raaxo leh.
Shirkadeena waxay sahay ku leedahay dhulweynaha Shiinaha, iyada oo wax soo saarkeedu yahay 500000. Waxay dhaaftay shahaadooyin kala duwan. Asxaabta xiisaha lihi way nala soo xiriiri karaan
1. Neef-celin, boor-celin la'aan, lakab saddex-lakab ah, sameysmaya meel neefsasho ah oo ah 360-degree oo saddex-cabbir leh.
2. Dhago xanuun aad u sareeya oo aad u jilicsan ayaa yareyn kara cadaadiska.
3. Sanka caagga ah ee qarsoon, ka-hortagga ceeryaanta, hagaajin karo, si looga fogaado nusqaamaha loona yareeyo neefsashada walxaha halista ah.
4.4 ilaalinta lakabka.
Lakabka kore wuxuu xannibayaa qaybo waaweyn. Lakabka meltblown ayaa ka ilaalin doona in walxaha ay u ekaadaan. Lakabka qaabdhismeedka
Meel 3D ah si uusan jirin xiriir u dhexeeya afkaaga iyo maaskaro.
Lakabka gudaha ee ka samaysan waxyaabo jilicsan ayaa taabanaya wejigaaga khibrad raaxo leh.
Qaab dhismeedka saddex-geesoodka ah ee 5.3D
Qaab dhismeedka 3D wuxuu kordhiyaa booska neefsashada, wuxuu kaa dhigayaa inaad si habsami leh u neefsato wuxuuna yareeyaa farqiga u dhexeeya maaskarada iyo wejiga. Cabirkani wuxuu ku habboon yahay qaababka wajiyada kala duwan. (Kuma haboona caruurta)
6. Raaxo leh in la xidho.
Xarkaha dhegaha ee laastikada oo tayo sare leh ayaa sahlaya in la xidho oo raaxo leh in la xidho muddo dheer. Suunka jillaab-iyo-loox la hagaajin karo wuxuu si fiican ugu habboon yahay raaxada maalinta oo dhan.
Hore: Maaskaro wajiga KS-9008
Xiga: 3 Maaskarada difaaca ee la tuuro
Shiinaha En149 Ffp2
Maska Shiinaha Ffp1